Mbola Mitokona Hatrany Ireto Mpiasan’ny Ozinina Any Filipina Ireto Na Eo Aza Ireo Fanafihan’ny Mpiambina sy Jiolahim-boto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jona 2015 4:50 GMT
Mivaky toy izao ilay sorabaventy: “Ataovy ara-dalàna ireo mpiasa ambany fifanarahana asa!” Sary: ST Exposure
Mitokona ankehitriny ireo mpiasa mpamokatra zava-pisotro misy alikaola malaza be, an'ilay lehilahy Filipina manankarena faharoa indrindra, mangataka asa ara-dalàna ary fepetran'ny asa tsaratsara kokoa. Na teo aza ny fanafihan'ireo mpiambina sy jiolahim-boto nokaramain'ireo mpampiasa, mbola manohy ny fampiatoany ny asa ihany ireo mpiasa mitokona efa maherin'ny herinandro izao.
Manakarama ireo mpiasa manana fifanarahana asa amin'ny alalan'ireo kaoperativa mpanome mpiasa manana ny karazany samihafa ilaina manerantany (Global Skills Providers Multi-Purpose Cooperative” sy “HD Manpower Service Cooperative”) ny ozinina Tanduay Distillers Inc.(izay miorina any Cabuyao, Laguna, 44 kilometatra na eo amin'ny 27 miles atsimon'i Manila).
Mpiasa an-tselika ireo olona miasa araka ny fifanarahana asa, izay tsy omena ireo tombotsoa fototra an'ny asa. Maro ireo orinasa any Filipina mampiasa araka ny fifanarahana asa mba hanenàna ireo vola mivoaka amin'ny asa ataony.
Araka ny sendikà Tanggulan Ugnayan Daluyong ng Lakas-Anakpawis sa Tanduay Distillers Inc (TUDLA), manao fifanarahana na manakarama olona eo ambanin'ny fifanarahana asa fotsiny ireo masoivoho roa ireo mba hanao ny asa izay tena ilaina ao amin'ny fanamboarana — izay fomba raràn'ny lalàna.
Tamin'ny 5-11 taona faramparany teo, olona eo ambany fifanarahana asa daholo ny 90 isanjaton'ny mpiasa rehetra tao amin'ny Tanduay Distillers Inc. (mpiasa mitotaly 397).
Mpiasa mitokona mitàna ny fandaharana eo amin'ny faritry ny tsatòka, miaraka amin'ireo fianakaviany sy ireo mpanohana azy ireo. Sary: Kilusang Mayo Uno.
Ho setrin'ilay olan'ny fifanarahana asa, nanangana ny TUDLA ny mpiasa tao Tanduay ny 16 Aprily, ary nametraka fangatahana hanaovana ara-dalàna ireo taratasy tany amin'ny Departemantan'ny Asa (DOLE). Tampotampoka teoanefa, nampanaovina sonia fifanarahana mandritra ny taona iray ireo mpiasa ambany fifanarahana asa, raha toa ka tsy nangataka azy ireo hanao sonia fifanarahana mihitsy ilay orinasa teo aloha.
Ny Sabotsy 16 May, nilazàna ireo mpiasa an-jatony fa tsy afaka omena tetiandro hanaovan-tsonia fifanarahana izy ireo. Izany hoe, efa tsy lany fetrandro niasàna izy ireo. Ny 18 May, Alatsinainy maraina, nanapaka hevitra teo an-toerana teo ireo mpiasa mba hanao fitokonana. Afaka hita ao amin'ny pejy Facebook-n'ny Kilusang Mayo Uno-Tagalog Tatsimo, ny fanavaozam-baovao isan'andron'ilay fampiatoana asa.
Araka ny TUDLA, manome vokatra zava-pisotro mitentina eo amin'ny 15 tapitrisa pesos (336.000 dolara) isan'andro ireo mpiasa ao Tanduay. Ilay tompon'ny orinasa, Lucio Tan, lehilahy faharoa amin'ny manankarena indrindra eo amin'ny firenena, araka ny lisitry ny Gazetiboky Forbes ny taona 2014, dia manana 270 lavitrisa pesos (6,1 lavitrisa dolara) afa-karatsaka.
Ireo mpiasa Tanduay, eo ankilany, mahazo karama zara raha misy P315 (7dolara) isan'andro, ary andrasana hanena io ho P255 (6 dolara) isan'andro ireo fanovàn'ny governemanta. Ny rafitra vaovao an'ny Karama Misy Ambaratonga Roa an'ny governemanta Filipiàna no anton'izany, izay lazaina ho vokatra araka ny asa, izay ambaran'ny vondron'ny mpiasa ho fomba fanao araka ny lalàna mba hampidinana ny karaman'ireo mpiasa any ivelan'i Manila.
Mitaraina ihany koa ireo mpiasa ao Tanduay hoe tsy afaka mahazo ny tombotsoany amin'ny andro tsy fiasàna andraisan-karama izy ireo (amin'ny tsy fiasàna noho ny aretina na fialantsasatra), tombontsoa hafa sy amin'ny fitsaboana, na fanampin-karama aza. Imbetsaka no milaza ny sendikà fa, voaroaka tampoka amin'ny asany ary tsy misy fanazavana ireo mpiasa.
Nolazaina ho nanakarama jiolahim-boto teo an-toerana ary vondrona mpiambina tsy miankina ireo mpampiasa, mba hanaparitaka ireo mpiasa mitokona sy ireo mpanohana azy. Azon'ny vondron'ny haino aman-jery ST Exposure an-tsary ilay fanaparitahana mahery vaika.
Hatry ny andro voalohan'ny fitokonana, nanao fahirano ary nandratra mihitsy ireo mpiasa nitokona sy ireo mpanohana azy ireo mpiasa miandraikitra ny fiambenana ny orinasa sy ireo olona be sandry hafa nambara ho voakarama vola. Am-polony no naratra noho ny kapoka. Ary hatramin'izao, nanosika ireo mpiasa hitokona hatrany sy hitolona ho an'ny karama ara-drariny, ireo tombotsoa sosialy ary ny fiahiana amin'ny asa, ireo fepetra tafahoatra fanandevozana amin'ny asa.